crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> June | 2018 | HimiloNetwork
Himilo June 13, 2018	Leave a comment 328 Views
Islam Abad (Himilonetwork) – Dadka qaar waxay ku doodi karaan in waaya’aragnimada nolosha ay muhiim u tahay noqoshada qof dhiirri-geliye ah, hayeeshe 11-jir u dhashay dalka Pakistan wuxuu caddeyn u yahay inaad kaliya u baahan tahay kalsooni iyo dhiirranaan fagaare ka-hadaleed ah. Hammid Safi wuxuu aad ugu go’ay wax laga yaabo in badan oo inaga mida inaysan ku dhiirran. Waa ...
Himilo June 13, 2018	Leave a comment 331 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – In cuuryaanimadu aysan lahayn xad gaar ah oo lagu qiimeeyo dadka naafada waxaa ka marqaati ka dhacay 69 jir kasoo jeeda dalka Shiinaha kaas oo isaga oo la’ labadiisa lugood fuulay buurta ugu dheer dunida ee Mt Everest. Halkan ka daawo muuqaal laga sameeyey safarkiisii dheeraa oo uu ku gaaray buurta ugu dheer adduunka.
Mexico – Marka Mas’uulku uusan oofin Ballamaha uu galo xilliga Ol’olihiisa.
Himilo June 13, 2018	Leave a comment 199 Views
Nairobi (Himilonetwork) – Maayar kamid ah maayarada magaalooyinka dalka Mexico ayay dadka degaanka laga soo doortay waxay ku xireen Aqalka dowladda hoose kadib markii uu oofin waayay balamo uu ka qaaday xilligii ol’olaha doorashada. Alfonso Hernández Montiel, oo ah maayarka Chichiquila, waxaa shan bilood oo qura uga harsaneyd muddo-xilliyeedkiisa, waxaana hor yiillay inuu oofiyo ballan uu dadka degaankiisa ka qaaday xilligii ...
Ganacsi lagu bilaabay $500 oo hadda ku fadhiya $1 bilyan oo doolar
Himilo June 11, 2018	Leave a comment 231 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Seygeeda shaqo ayuu ku maqnaa, xaamilo ayay ahayd Kendra Scott waxayna garwaaqsatay fikrado ah inay samayso lacag iyadoo dhabo ganacsi u sii marayso. Waxay jiiftay gurigeeda oo ku yaalla magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka, waxayna la daalacsayay canuga caloosheeda ku jiray, Kendra Scott waxay billaawday inay samayso agabka ay haweenka quruxdu u xirtaan. Sanadkii ...
Hergabka oo daawo loo helay
Himilo June 9, 2018	Leave a comment 303 Views
Nairobi (Himilonetwork) – Dhakhaatiir kasoo jeedo Ingriiska waxay sheegeen inay heleen daawada Hergabka taaso la dagaalami karto Fayraaska keeno Hergabka. Waxaa la sheegay in daawadani ay ka hortagi karto in unugyada proteenka jirka aadanaha uu inta badan weeraro fayraaska taaso marka dambe dhalin karto inuu faafo. Daawadan ayaa wax tar noqon karta marka la siiyo qofka la xannuunsan Hergabka wakhti ...
Muslimiinta Shiinaha oo cadaadiskii ugu xumaa wajahaya taniyo bilashadii Ramadaanka.
Himilo June 9, 2018	Leave a comment 332 Views
Nairobi (Himilonetwork) – Ma ahayn wax la dheereysto. Waxay ahayd dhawaaq inuu soo socdo lasii ogaa. Laakiin su’aali kama taagna inaysan tani ahayn mid marmarsiinyo loo raadsan karo. Xukuumadda Shiinaha ayaa taniyo dhalashada Bisha Ramadaan ee sannadkan waxay cadaadiskii ugu adkaa kusoo rogtay Muslimiinta ku nool dalkeeda kuwaas oo loo diiday micno walba oo ay ku gudan karaan waajibaadka bisha ...
40 qof oo Shahaadada loogu qabtay Afurka ka dhacay Dubai.
Himilo June 9, 2018	Leave a comment 261 Views
Dubai (Himilonetwork) – Afurka bisha Ramadaan ayaa fursad lagu qaato go’aanka bedelay noloshooda wuxuu u noqday dad gaaraya 40 qof kuwaas oo diinta Islaamka kusoo biiray. Dhammaantood waxay mar qura Shahaadada ku hor iclaamiyeen xaflad afur oo ay soo qaban-qaabisay hey’adda Dubai Islamic Information Center kana dhacday Xarunta Dar al Berri maalintii Arbacada. Qaar badan oo kamid ah waxay muddo badan ...
50 dal oo dagaal ku iclaamiyay bacda
Himilo June 9, 2018	Leave a comment 275 Views
Nairobi (Himilonetwork) – Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in illaa 50 dal ay dagaal ku iclaamiyeen bacda iyo sidii loo ciribtiri lahaa. Dowladda Hindiya waxa ay sheegtay in marka la gaaro sanadka 2022-da ay gabi ahaanba joojin doonto isticmaalka bacda, iyada oo hadda laga bilaabayo in laga mamnuuco magaalada caasimadda ah ee Dehli. Balanqaadka ka yimid ...
Himilo June 9, 2018	Leave a comment 220 Views
Nairobi (Himilonetwork) – Hiigsiga yool cusub, hey’adda Bisha Cas ee Turkiga ayaa ku han weyn inay caawiso hal milyan oo qof inta lagu guda-jiro bisha Ramadaan. “Waxaan caawinay qoysas gaaraya 145,000, waxaana aynu kaalmo gaarsiinay dadyow ku kala nool 35 dal oo dunida dacalladeeda ah,” ayuu yiri madaxa hey’adda, Kerem Kinik, isaga oo la hadlayay hey’adda warfaafinta Turkiga ee Anadolu. Kirik ...
Afurka loogu yeeray Not Trump’s Iftar oo lagu hor qabanayo Aqalka Cad.
Himilo June 9, 2018	Leave a comment 254 Views
Washington (Himilonetwork) – Ururka ugu weyn hoggaanka Muslimiinta Maraykanka ayaa isaga oo kaashanaya ururrada xuquuqaadka rayidka wuxuu qaban doonaa afur lagu magacaabay NOT Trump’s Iftar oo lagu dhaliilayo falalka naceybka ah oo madaxweynaha Maraykanka ku hayo Muslimiinta USA. “Ururka wuxuu indhihiisa ku arkay falal xaqiraad iyo naceyb ah oo looga soo horjeedo Muslimiinta iyo xuquuqda dadka kale ee tira-yarta ah ee ...
Shirkad si la yaab leh ku tijaabinaysa heerka nadaafaddeeda!
Laba wiil oo wajiga madax-weyne caan ah ku dhacay lacago fara badan!
Laacibka iska diiday inuu xirto maaliyadda lagu soo xardhay astaanta ragga isku hawooda.
Dar-xumida ay ku jiraan darbi-jiifta Maraykanka.
Kasbigu ma ahan wax la isku caayo–fadlan qadari ama qiimee howlaha xirfadleyda